Muxuu yahay hubka uu Shiinaha heysto ee uu Mareykanku ka baqayo? | Xaysimo
Home War Muxuu yahay hubka uu Shiinaha heysto ee uu Mareykanku ka baqayo?
Xoghayaha Gaashaanshigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa shalay sheegay in tallaabada uu Shiinuhu ku hormarinayo hubka hypersonic uu walaac ka abuurayo gobolka.
Wuxuu sheegay in Mareykanku uu isku diyaarinayo inuu wajaho khatarta uga imaanaysa Shiinaha.
Isagoo ka hadlayay tijaabadii hubka Shiinaha ee July, ayaa Lloyd Austin wuxuu sheegay inay ka walaacsan yihiin awoodda militari ee Shiinaha isagoo sababta ku sheegay inay taasi walaac ka abuureyso dalalka deriska ah.
Wuxuu soo hadal qaaday dadaallada uu Shiinuhu ku horumarinayo hubka cusub si uu u xoojiyo awooddiisa militari.
“Waan sii wadi doonnaa xoojinta awooddeenna si aan nafteenna iyo tan xulafadeennaba u difaacno waan isku diyaarin doonnaa inaan wajahno khatarta Shiinaha,” ayuu yiri.
Mareykanka ayaa sidoo kale horumarinaya hubka hypersonic
Bishii la soo dhaafay, Madaxa Ciidamada Mareykanka Jeneraal Mark Milley ayaa sheegay in Mareykanku uu horumarinayo hubka hypersonic.
Khubarrada ayaa aaminsan in Mareykanku uu ka walaacsan yahay in Shiinaha iyo Ruushka aysan ka baaqsan doonin horumarinta hubka.
Bishii September ee sanadkan, Mareykanka ayaa sheegay inuu ku guuleystay tijaabada hubka Hypersonic.
Hubka Hypersonic ayaa ilaa shan goor ka dheereeya dhawaqa wuxuuna ka hortagi karaa hubka hawada ku jira.
Si kastaba, khubarrada qaar ayaa sheegay in gantaallada hypersonic ay sababi karaan labo xaaladood sida inuu walaac abuuro amaba xabbad-joojin.
‘Hannaanka diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi’
Isagoo ka hadlayay Kuuriyada Waqooyi, ayaa Lloyd Austin wuxuu sheegay in arrinta dalkaasi uu kala hadlay Wasiirka Gaashaandhigga Kuuriyada Koofureed Soo Wook, iyo sidoo kale iskaashiga ganacsi.
Wuxuu sheegay in dadaallada Kuuriyada Waqooyi ay walaac ammaan ka abuurayaan gobolka. Wuxuu intaas raaciyay in Mareykanka iyo Kuuriyada Koofureed ay diyaar u yihiin in wada xaajood laga galo arrinta Kuuriyada Waqooyi.
Dhanka kale, wasiirka gaashaandhigga Kuuriyada Koofureed Soo Wook ayaa sheegay in si loogu guuleysto nabad waarta oo ka dhalata gacanka Kuuriya, ay muhiim u tahay xulafadiisa inay fahmaan dadaalka Kuuriyada Koofureed.
Inkastoo xaalad dhaqaale oo ba’an ay ka jirto saameynna uu ku yeeshay xanuunka coronavirus, haddana Kuuriyada Waqooyi ayaa diidday dalabka Mareykanka ee ah inay wada hadallo yeeshaan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Mareykanka looga baahan yahay in marka hore uu wax ka beddelo aragtidiisa ku aaddan Kuuriyada Waqooyi uuna ka qaado cunaqabateynta.
Maamulka Joe Biden, ayaa dhanka kale, sheegay in cunaqabateynadaas caalamiga ah aan la qaadi doonin ilaa Kuuriyada Waqooyi ay joojiso horumarinta hubka nukliyeerka.
Horraantii toddobaadkan, Pentagon-ka ayaa sheegay in Mareykanka ay tahay inuu xoojiyo iskaashiga dalalka uu xulafada la yahay si looga hortago khatarta militariga Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi.